သတင်းစာဆရာများကာကွယ်ပေးသည်။ ဒယ်ဖနီ Caruana Galizia မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး
12 ဇန်နဝါရီ 2018
စေးကပ် post ကို By အိုလီဗာ Bienkowski On 12 ။ ဇန်နဝါရီလ 2018
#PixelHELPER ဒယ်ဖနီ Caruana Galizia ၏လူသတ်မှု၏ဤကဲ့သို့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်များ၏ဖမ်းဆီးခြင်းမှဦးဆောင်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ထံမှ 100.000 €ချီးမွမ်း။ ကျနော်တို့ကပါဝင်နိုင်ငံများရှိမီဒီယာဖိအားစုဆောင်းတည်ဆောက်ဖို့လူသတ်သမားများမှသဲလွန်စများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များစီစဉ်နေကြသည်အဖွဲ့အစည်း IL-KENNIESA နှင့်အတူအတူတကွ pixelhelper.org/de/spenden ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်ပိန်းကိုထောကျပံ့ပေးပါ။
"အခြား၏အသွေး၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ကြေညာစာတမ်း," - အမေရိကန်သမိုင်းပညာရှင်က Mike Davis ကကားဗုံးတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤအစာတမ်းတွင်၏လတ်တလောမှာလည်းတဆယ်တနှစ်ကီလိုမီတာအနောက်ဘက်မော်လ်တာရဲ့မြို့တော် Valletta ၏ Bidnija အတွက်သည့်ကားလမ်းတစ်ဦးအဖြူ Peugeot 108 ၏အောက်ဆုံးမှပူးတွဲပလပ်စတစ်ပေါက်ကွဲ, 309 သူမြို့သားအဖြစ်လူသိများ, Semtex ပါဝင်သည်။
16 တွင်။ အောက်တိုဘာလဒယ်ဖနီ Caruana Galizia သူမ၏ကားတစ်စီး၏ဘီးနောက်ကွယ်မှ, 53 နှစ်ရှိပြီနေဆဲဖြစ်သည်။ သူမသည်တစ်ဦးသေးငယ်ရိုင်းဖို့မြေနဲ့တက်နေတဲ့အနီရောင်-နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခု zucchini ဧက, 270 မီတာ, အတိတ်, သမုဒ္ဒရာ၏ဝေးလံသောရောင်ခြည်အနည်းငယ်ကနေမြင်နိုင်ပါသည်ရာမှတောင်ပေါ်ကဆင်း, left ကိုဖွင့်, အဓိကလမ်းမကြီးဖို့ဖုန်လမ်းမောင်း တစ်ဦးဖြူကောင်တဲ့မော်တော်ကားပေါ်အပြားသွားကြဖို့သူ့လိုကမေးတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ယုံကြည်ရသောပေါက်ကွဲမှုဖြစ်။ 15.04 ညနေမှအကြွင်းအကျန်ညာဘက်ဘေးနားရှိလမ်းမှလယ်ပေါ်တွင် Peugeot 100 ကိုက်ဖြစ်ကြသည်။ သုံးရက်အကြာတွင် Valletta Galizias အလောင်းများ၏ Mater Dei ဆေးရုံများတွင်စစ်ဆေးခြင်းသူခုနစျပါးဒတျချြမှုခင်းကျွမ်းကျင်သူများ, ကြည့်ဖို့အများကြီးမရကြဘူး။ တိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးလူသိများနှင့်အများဆုံး warlike သတင်းစာဆရာများ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏နည်းနည်းအကြွင်းအကျန်။ သူမ, 29 မိနစ်သူမ၏မသေမှီသူမ၏ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာသူမ၏နောက်ဆုံးစကားများ posted ဖူး: "သင်အခုကြည့်ရှုဘယ်မှာနေပါစေ: နေရာတိုင်းမှာလူလိမ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာကြေကွဲဖွယ်ပါပဲ။ "
ဒယ်ဖနီ Caruana Galizia
Strasbourg အတွက်အီးယူပါလီမန်၌တစ်ဦးကတပတ်အကြာမှာသားသုံးယောက် Galizias, အီးယူအပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်မော်လ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမ၏မိခင်ဘာလူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းနှင့်ကပြောပါတယ်။ အဆိုပါအစိမ်းရောင် Mep Sven Giegold မိုက်ခရိုဖုန်းတိုးလာတယ်။ "ဒယ်ဖနီလမ်း၌သေဆုံးခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမကသူ့ကိုလူသတ်သမားတိုက်ခိုက်မှုမတော်တဆမှုများကဲ့သို့ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့မှပင်မဟုတ်ကြိုးစားခဲ့ပုန်းအောင်းရှိခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်တွင်: ဒီအာဏာကိုတစ်ဦးရက်စက်စွာသရုပ်ပြခဲ့တာ "ဟုသူကပြောပါတယ်။ အဆိုပါဗုံးကိုရဲအကြီးအကဲသို့မဟုတ်ရှေ့နေချုပ်၏ကားကိုအောက်မှာမဟုတ်ခဲ့ဘယ်ကြောင့်ဒါဟာရှင်းပါတယ်: "ဒါဟာမော်လ်တာအတွက်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ system ပေါ်တွင်တစ်ဦးအလင်းပစ်ချတဲ့သူဒယ်ဖနီ, ဖြစ်ခဲ့သည် - ဤအာဏာပိုင်များမဟုတ်ခဲ့ပေ။ "
Strasbourg အတွက်အောက်မေ့ဖွယ်ဝန်ဆောင်မှု running ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, rosy Bindi, Valletta ၏မြို့ရိုးကိုဖို့အီတလီ Anti-မာဖီးယားကော်မရှင်, အ Excelsior ဟိုတယ်၏ဦးခေါင်းကိုအထဲသို့ဝင်သော။ နေ့ရက်ကာလအဘို့မော်လ်တာအတွက်ကော်မရှင်လမ်းပေါ်ခရီးစဉ်ကြာမြင့်စွာစီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်ခံခဲ့ရပေမယ့်ယခုဘလော့ဂါများ၏လုပ်ကြံခံရပြီးနောက်, စိတ်ဝင်စားမှုကြီးမားသည်။ နားထဲတွင်ဝတ်စုံကနေချောမွေ့ gelled သက်တော်စောင့်, ပွင့်လင်း cable ကို screw နှစ်ခုကဝိုင်း, Bindi တစ်စားပွဲ၌ထိုင်နှင့်ပေါ်မှာမိုးသည်းထန်စွာသားရေကုလားထိုင်များတွင်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသူဂျာနယ်လစ်ကြည့်ပါတယ်။ အဆိုပါမာဖီးယား Bindi "အနည်းငယ်ပရဒိသု" အဖြစ်မော်လ်တာကိုမြင်ရလို့ပြောပါတယ်။ နှင့် "မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်ပူဇော်ကြောင်းဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုပေး" "ပြဿနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ " ဖြစ်နိုင်
မော်လ်တာသည်, Bindi ၏ထုတ်ပြန်ချက်များပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဆယ်စုနှစ်များစွာသူမအီတလီမာဖီးယားသူတို့ရဲ့စကားလုံးတခုတခုအပေါ်မှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။ မော်လ်တာသည်သူ၏ဂုဏ်သတင်းနှင့် ပတ်သက်. လူသတ်မှု Galizias များအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူမ၏လူသတ်မှု, ဒါကြောင့်ကျွန်းပေါ်မှာအများကြီးမြင်ရ, မော်လ်တာအတွက်ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပတ်သက်. အလေးအနက်နေသောသူတို့က, မရှိတော့လုံခြုံဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးစာတမ်းတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Giegold, အခွန်ရှောင်မှုကိုနှင့်အတူဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အတိအကျကိုနိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးပို့ဖို့ဖိတ်ခေါ် Galizias သုတေသနသိတယ်။ သူကဆိုရှယ်လစ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းယောသပ်သည်မပ်စ်ကတ်၏နှုတ်ထွက်စာကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်နှင့်ဥရောပပါလီမန်ကမော်လ်တာမှတစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စေလွှတ်မည်လိုလား, ဒါကြောင့် "တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး restore" လိမ့်မည်ဟုသေချာ။
သူမသည်ကြောင့်လမ်းကိုမြင်သူတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ပါဘူး။ shell ကိုကုမ္ပဏီများ, အခွန်ဟေဗန်, မှောင်မိုက်အဇာဘိုင်ဂျန် Connection ကို, ရေနံမှောင်ခို, နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရောင်းအားနှင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစား၏, ထိုကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအကြောင်းကိုဒီရက်ထို့နောက်အနက်ရောင်ပိုက်ဆံဆွေးနွေးချက်သတင်းပို့တဲ့အခါမှာ။ ထို့အပြင် Galizias အကြီးမားဆုံးပုံပြင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ သူမ၏သား Mathew 2016 သည့်ပနားမားသတင်းစာများကထုတ်ဖော်ပြသသောသုတေသနကွန်ယက်ကို IJIC မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သူ့ကိုအကြောင်း Galizia မော်လ်တာအတွက်တင်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများတယ်။ သာစွမ်းအင်, ခရီးသွားလာရေးယနေ့ဝန်ကြီး - - အိမ်ရှေ့ကုမ္ပဏီများ British Virgin Islands နဲ့ပနားမားအတွက်ပြောနေတာခဲ့ကြသည်သူမသည် Keith Schembri ဝန်ကြီးချုပ်မပ်စ်ကတ်၏ဝန်ကြီးအဖွဲ့၏ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်, သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Konrad Mizzi ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်နိုင်ငံရေးသမားများ, အငြင်းပွားဖွယ်အစိုးရဝင်ငွေသတင်းရင်းမြစ်နှင့်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်း၏သံသယရှိပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြားနယ်နိမိတ်ပျော်ဖို့ဟန်တစ်တွေများရုပ်ပုံသို့အတူတကွစီးဆင်းလိမ့်မယ်။
အဆိုပါနေ့စဉ်မှတဆင့်တစ်ဦးဆုံးသော Open-ဝေဟင်အလယ်ခေတ်ပြတိုက် - ဒါဟာကိုးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဥရောပယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ဖြစ်သည့်ကားတစ်စီး-အခမဲ့, သဲ-အရောင်အဟောင်းကိုမြို့, အတူညံ့ဖျင်းမြို့ဆင်ခြေဖုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် tanned ကျောင်းသားများအပြည့်အဝနေသော Valletta အတူကိုက်ညီသောပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ် သောင်းချီယင်း၏ရောင်စုံတံခွန်နှင့်အတူခရီးသွားဧည့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏သူတို့ရဲ့စံ၏ Crusaders အဖြစ်လမ်းညွှန်စာအုပ်လေးတွေနဲ့အတိုင်းလိုက်နာ, ပြီးတော့ညဦးယံ၌မင်္ဂလာအနီရောင်စပျစ်ရည်ကိုအတွက်ယုန်ကိုစားခြင်းနှင့် hinterherzukippen Cisk စတော့ရှယ်ယာ pintweise ဖို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, စိန့်ဂျူလီယန်အတွက်ပင်လယ်မှုန်ရေမွှားများဖျန်းပါစေရန်။
သူတို့ထဲကတချို့ကယောနသန်သည်ကူးတို့နှိုး။ Galizias သေသောနောက်အဋ္ဌမနေ့၌သူသည် Westin Dragonara ၏ဧည့်ခန်းထဲမှာအပြာဝတ်စုံကိုအတွက်ပိုမိုပါးလွှာမျက်မှန်နှင့်အတူထိုင်တော်မူ၏။ ဖန်ခွက်မျက်နှာစာနောက်ကွယ်မှ, ကျောက်ဆန့်ကျင်ရိုက်နှက်လှိုင်းတံပိုးက, ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ဒေါက်မိသားစုများသင်္ဘောသားစားဆင်ယင်ပါ။ ကူးတို့ဟာကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်များ၏လုံခြုံရေးအကြီးအကဲဖြစ်ပြီး, ဤကသင့်အဖြစ်မဟုတ်အရာအားလုံးမော်လ်တာသွားကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကသည်အထိငွေကြေးခဝါချမှုတာဝန်ခံ, ကူးတို့ရဲအရာရှိကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Galizias ဘလော့ဂ်, သူကပြောပါတယ်, စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်အကြိမ်ကြိမ်သူ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ "သူမဟာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ကြပြီမဟုတ်သောအရာသိတယ်။ လူများတို့သည်စာနယ်ဇင်းသမားများကိုတက်မယ့်အစားရဲအရာရှိခိုလှုံပါ၏။ "ကူးတို့ဘရပ်ဆဲလ်တရုတ်နိုင်ငံ, လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များလေ့ကျင့်သင်ကြား, ဂျာမနီ, သူမောလ် Anti-ငွေကြေးခဝါချမှုအခွင့်အာဏာ (FIAU) ၏ဦးခေါင်းအဖြစ်အစားထိုးနိုဝင်ဘာလ 2016 အတွက် Gaddaffis စာရင်းကိုင်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ မတ်လနှင့်ဇူလိုင်လ 2016 2017 အကြားအစိုးရအရာရှိများဆန့်ကျင်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများသံသယအပေါ်လေးပါးအစီရင်ခံစာများရေးသားခဲ့သည်။ အားလုံးကူးတို့ကပြောပါတယ် Galizia အားဖြင့်သုတေသနအပေါ်အခြေခံခဲ့သည်။ အဘယ်သူသည်အချိန်ကြာသူအသေးစိတ်အထဲသို့ဝင်သောအခါအသူ့ကိုနောက်လိုက်ဖို့လိုသည်။
ကက်ဘိနက်အကြီးအကဲ Keith Schembri သူရုရှားသုံးခုမောလ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များရောင်းချမှုကနေငွေကြေးနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားပါတယ်ရာ 100.000 ယူရိုဖုံးကွယ်ဖို့လည်းပနားမား၌သူ၏စာတိုက်ပုံးကုမ္ပဏီအသုံးပြုသော: ဘယ်လို FIAU လေ့လာမှုများ၏ရေတိုဗားရှင်း။ ထို့အပြင်သူတစ်ဦးမောလ်သတင်းစာမန်နေဂျာဝက်သန်းယူရိုလာဘ်ထိုးပေးဆောင်။ ကူးတို့ Schembri အစိုးရသတင်းစာအလေးချိန်ဖြစ်နေဆဲကြောင်းသေချာစေရန်စေချင်ကြောင်းယုံကြည်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူသေချာစက္ကူနောက်ထပ် Schembri နေဆဲစာရွက်ကုန်သည်တစ်ဦးကြားပေါက်ကဲ့သို့သူ့ကိုမှမိမိတို့စက္ကူကိုရည်ညွှန်းကြောင်းစေချင်တယ်။ နှင့်: Schembri ဟောင်းစွမ်းအင်အတွင်းရေးမှူး Konrad Mizzi ဒူဘိုင်းကနေ LPG လာဘ်နှင့်အတူမော်လ်တာသည်တစ်ဦးကုမ္ပဏီကနေရလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီပိုက်ဆံနှစ်ခု၏ shell ကိုကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ Galizias နောက်ဆုံးဘလော့ entry ကိုဤအငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာရည်ညွှန်းပြီး "နေရာတိုင်းမှာလူလိမ်, ရှိပါတယ်" ။
ဓါတ်ငွေ့ကန်ထရိုက်များအတွက် 1,07 ယူရိုသန်း?
Schembri နှင့် Mizzi အရာအားလုံးငြင်းဆိုသည်။ အဘယ်အရာကိုအများအပြားမော်လ်တာ၏တရားသံသယနိုင်သည် FIAU များ၏အစီရင်ခံစာများကိုတောင်ရဲမှဖြစ်စေဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကစေလွှတ်မ - သို့မဟုတ်ဖိုင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဒီကနေဆင်း။ သူတို့အဘယ်သူအားမျှရှိခဲ့အကျိုးဆက်များ။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကူးတို့, သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချားလ်စ် Cronin သို့မဟုတ်ဟောင်းတဦး FIAU CEO ဖြစ်သူ Manfred Galdez ဖြစ်စေခဲ့သည်။ မည်သူမျှရုံးထဲကဖြစ်ပါတယ်။ Galdez အစောပိုင်းအငြိမ်းစားသို့စွပ်စွဲသူ့ဟာသူအသုံးပြုပုံသွားလေ၏။ 16 တွင်။ ဇွန်လ 2017 လက်၌သူ၏ဆက်ခံသူကူးတို့နှင့်အ Cronin သူမ၏ထုတ်ပယ်နှင့်အတူအဖြူရောင်စာအိတ်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျွန်မသိတယ်ဘယ်တော့မှအကြောင်းပြချက်," ကူးတို့ကပြောပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. သူသာဆေးပြားနှင့်အတူအိပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ FIAU အဆိုပါ taz, သူတို့ကကူးတို့နှင့်အ Cronin ပယ်ချရန် "ကိုအကောင်းဆုံးအဘို့မိမိတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ထားရှိမည်" တယ်ပြောပါတယ် - "။ စွမ်းဆောင်ရည်-related အကြောင်းရင်းများ" မှ
သူသည် FIAU အတွက်ကျန်ရစ်ခဲ့သူဟာ Galizias ကူးတို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့သည့်ကြီးမြတ်သမိုင်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြပြီ။ ဒါဟာ Michelle မပ်စ်ကတ်, ဝန်ကြီးချုပ်၏ဇနီးနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်ခဲ့သည်။ မော်လ်တာနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန် 1,07 နှစ်သက်တမ်းနှင့်အတူဓါတ်ငွေ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများတခုတခုအပေါ်မှာသဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးနောက် justament - ပနားမားအတွက်သူမ၏ကုမ္ပဏီ Egrant ၏အကောင့်တွင်အဇာဘိုင်ဂျန် 18 ထံမှယူရိုသန်းစီးကြသင့်ပါတယ်။ "ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတို့ရှောင်ရှားရန်လိုခဲ့," ကူးတို့ကပြောပါတယ်။ သူက Anti-အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအခွင့်အာဏာတရားစွဲထားပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့နောက်တဖန်သူ့ကိုမထားကြ၏။
အဆိုပါ FIAU အစီရင်ခံစာများအစဉ်အဆက်ဟုသိကြသည်, "နိုင်ငံရေးတွင်ဒယ်ဖနီ၏အဆွေတော်" မိမိကိုမိမိခေါ်ဆိုနှင့်သူမ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသူတစ်ဦးသည်လူအပေါ်တည်ရှိသည်။ ကွန်ဆာဗေးတစ် PN, တစ်ခုတည်းသောအတိုက်အခံပါတီရှိမုန် Busuttil ၏လက်ထောက်; အမေရိကန် televangelist ၏စတိုင်လ်များနှင့်အသံနှင့်တစ်ဦးချင်းလူသား, ဘုရားကျောင်း, သူ့ထိုးပေါ်အနက်ရောင်စိတ်မသာညည်းတွားတီးဝိုင်း mottled ။ "သာ WhatsApp ကိုကနေတဆင့်သတင်းပါ" ဟုသူကဆိုသည်။ "ကျနော့်ဖုန်းကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ " ဒါဟာပါလီမန်လွှတ်တော်အဆောက်အဦ, Valletta ၏လူကူးလမ်းကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောင့်ငါးမွေးကန်ကဲ့သို့အာကာသအတွင်းအတိုက်အခံများ၏ကွန်ဖရခန်း၌လက်ခံတွေ့ဆုံလာရောက်လည်ပတ်သူများ။
Galizia ပရီးမီးယားလိဂ်မပ်စ်ကတ်၏အစိုးရဆန့်ကျင်ပိုပိုပြီးပစ္စည်းကိုတက်တူးဖော်ခြင်းအဖြစ်ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲများဆွဲထုတ်။ Busuttil အတိုက်အခံရဲ့ထိပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကအဆိုပါ FIAU များ၏အစီရင်ခံစာများမှငှါထားတော်မူ၏။ Busuttil စာနယ်ဇင်းမှမြိန်ရေရှက်ရေနှင့်အတူအားလုံးအသေးစိတ်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမသုံးစွဲခြင်းရှိခဲ့သည်: အဆိုပါမောလ်မပ်စ်ကတ်သစ္စာရှိမှုကျင်းပခဲ့တယ်။ Busuttil လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မော်လ်တာရဲ့စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေသည်၏ပါပြီစေခြင်းငှါ, သောဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ "ငါသည်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကနေတဖြည်းဖြည်းအနားယူချင်ခဲ့တယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ယခုမူကား, သူမ၏သေသောနောက်, အရာအားလုံးကွဲပြားခြားနားသည်။ "
ရဲဝန်ကြီးဆန့်ကျင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့အဘို့အဇူလိုင်လ Busuttil ခုနှစ်တွင်တရားစွဲခဲ့သည်။ Schembri နှင့် Mizzi အနေနဲ့ကန့်ကွက်တင်သွင်းထားကြသည်။ "ကျွန်မမဆုံးရှုံးလျှင်, ငါ Strasbourg ကိုသွား," Busuttil ကဆိုသည်။ သူကတစ်ဦးအဆုံး Galizias အလုပ်ရောက်စေဖို့လိုသည်။
အဆိုပါဘလော့ဂါမပ်စ်ကတ်, အကြမ်းဖက်အစိုးရ၏၏ကျန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့်လည်းအတိုက်အခံ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းသိရသည်။ "တောက်ပဆောင်းပါးများ" နဲ့တချို့ကအဖြစ်ပင်အာဏာရပါတီ PL ၏ဌာနချုပ်၌မိမိတို့အဆိုးဆုံးရန်သူများကိုပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝတွေကိုအကြောင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်စာသားများနှင့်အတူ။ သို့သော်မော်လ်တာအတွက်အဘယ်သူမျှမအလေးအနက်ထားကားအောက်တွင်သူမ၏ဗုံးမှီဝဲသောသူသည်အကျင့်ပျက်နိုင်ငံရေးသမားများရှိခဲ့သည်ယုံကြည်သည်။
အဆိုပါမော်လ်တာအတွက်သီအိုရီ - နှင့်အီတလီ - နားထောငျအမြားဆုံးဖွယ်ရှိသည် Galizia လစ်ဗျားကနေတောင်ပိုင်းဥရောပမှရေနံများမှောင်ခိုသူ့ခြေရင်းမှမာဖီးယားအပေါ်၎င်းတို့၏သုတေသနတွင်လာသည်ဟုဖြစ်ပါတယ်။ , မော်လ်တာငါးကားကိုဗုံးခွဲမှုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ရှိခဲ့ကြသည်, သားကောင်များပြစ်မှုဆိုင်ရာ milieu ထံမှလာသောဤယူဆချက်ဘို့တိုက်တွန်း။ အဘယ်သူအားမျှအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ အခါတိုင်း Semtex အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘယ်လစ်ဗျား Zuwara ဥပမာထုတ်လုပ်နေသည် - လည်းကုန်ခိုးသွင်းခိုးထုတ်ခြင်းကရေနံကနေကြွလာရှိရာ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, များစွာသောမပ်စ်ကတ် Galizias သေခြင်းတရားအတွက်တာဝန်ရှိသည်နှင့်နုတ်ထွက်သင့်ကြောင်းမော်လ်တာပေါ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီထက်ရဲ Galizia ကာကွယ်ထားဘူးလို့ပဲ။ သူမဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ထိခိုက်အဖြစ်ကြောက်လန့်သောကြောင့်တကယ်တော့ဘလော့ဂါ, အတိတ်တွင်ရဲများကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးငြင်းဆန်ပယ်ချထားခဲ့သည်။ မပ်စ်ကတ်, အ Galizias မိသားစု, အတိုက်အခံနှင့်မောလ်စာနယ်ဇင်းသမားများအတွက်စွပ်စွဲအောက်ပါအတိုင်းသကဲ့သို့, လက်ထောက် Busuttil ရေးဆွဲပြီး: "။ ဘယ်အရာကမှနေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်အကျင့်ပျက်ဝန်ကြီးများရုံးထဲမှာဆက်ရှိနေသင့်တယ်, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆန့်ကျင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်" ဟုအဆိုပါပြည်နယ်၏အားနည်း, သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်းခံရန် အဖွဲ့အစည်းများ - ဤသို့ဖွဲ့စည်းရာဇဝတ်ကောင်များ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသည်းခံ။
အဆိုပါအခြေအနေများတွင် Uninvolved သို့သော်အတိုက်အခံမဟုတ်ပါဘူး။ မော်လ်တာအွန်လိုင်းလောင်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝနိုင်ငံခြားသားများမှပတ်စ်ပို့များရောင်းချမှုအပေါ်, စီးပွားရေးအရအလွန်နိမ့်ကော်ပိုရိတ်အခွန်ဖြစ်ပါတယ်။ Busuttils PN ကသယ်ဆောင်။ "မော်လ်တာညစ်ပတ်ပိုက်ဆံထံရောင်းချသည်၎င်း၏အချုပ်အခြာအာဏာရှိပါတယ်" ဟုအဆိုပါအစိမ်းရောင် Giegold ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နိုင်ငံရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအထက်တန်းလွှာများအကြားခရိုနီဝါဒဖြင့်အစားထိုးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိပါတယ်။ "
မော်လ်တာအတွက်စိန့် Julian ၏လောင်းကစားရုံမြို့ Mayfair ရှုပ်ထွေးအတွက်များစွာသောရုံးအဆောက်အဦ၏တဦးတည်းကိုနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများအမည်စာတိုက်ပုံးများဝင်ရသောကျွန်းပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အဆိုပါကုမ္ပဏီများမှန်ဖို့ "မော်လ်တာဖိုင်များ" တစ်ယိုများ၏ဘာသာရပ်နောက်ဆုံးမေလတွင်ခဲ့ကြသည် စာသားကရုံးခန်းထဲမှာအခိုင်အမာအဆိုပါသံခိတ်အဖြစ်ကြုံရတဲ့မှန်ကလူရှိကြောင်းမှတ်ချက်ချခံရဖို့ပဲစစ်မှန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းမရှိ။ အခုတော့ခြောက်လအကြာမှာ Mayfair နားခန်းထဲမှာရုပ်ပုံအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်: K သည် + S ကို, Sixt, BASF နှင့် Jacobs - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်း၏ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးနေစာတိုက်ပုံးများခွဲများ, ရှိသမျှရှိသေး။
မော်လ်တာကျိုးနပ်ဖို့အမြတ်အစွန်း shift မှ: မော်လ်တာစီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီများထသော 35 ရာခိုင်နှုန်းကိုအခွန်အနက်ပြန်ရာခိုင်နှုန်းကို 30 မှတက်ချေ; တကယ်တော့ဒါသာအလွအနိမ့်5ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြိုလဲ။ မော်လ်တာ, အရှင် Galizia ကမျြးစာလာခဲ့ကြောင်း "ညစ်ပတ်သောအရပ်" ဟုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါသတင်းစာမော်လ်တာယနေ့တွင် 2015 ထို့ကြောင့်မော်လ်တာမှ4ဘီလီယံယူရို၏ပေါင်းစုအကျိုးအမြတ်စီးကြောင်းတွက်ချက်ထားသည်။ တိုင်းပြည်ထွက်လုနီးပါး 250 သန်းအခွန်ငွေကြေးနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားပါတယ်။ 1,4 ဘီလီယံကိုနိုင်အောင်ပျောက်ဆုံးသွားပြီအခြားပြည်နယ်ဘဏ္ဍာဖြစ်လိမ့်မည်။ အက်ဒွပ် Scicluna, မော်လ်တာရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးသည်သူ၏ဦးခေါင်းကိုချောက်ချား။ မော်လ်တာလုပ်ခအတွက်ဂျာမနီ၌ရှိသကဲ့သို့ငါးပုံတစ်ပုံအဖြစ်မြင့်မားရောက်နေတယ်ဆိုရင် "အလုပျသမားထို့နောက်သူတို့ကဒီမှာသူတို့ရဲ့လုပ်အားခလေး-ပဉ္စမအားဖြင့်လိမ်လည်လှည့်ခံကြသည်ဟုပွောနိုငျသလဲ ၏သင်တန်း, "Scicluna ဆိုပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ "တစ်ဦးအမြင်ပြဿနာရှိပါတယ်။ " သူ့တိုင်းပြည် "လွဲ" က၎င်း၏အခွန်စနစ်, မတရားကုသခံခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်တစ်အခွန်ဆိပ်, ဒါပေမယ့်ကမ်းလှမ်းမှုကို "အပြိုင်အဆိုင်" အခွန်နှုန်းထားများသည်မဟုတ်။ "အဲဒီရှက်စရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသလား?" သူကမေးတယ်။ "! ဘယ်သူမျှမက" တကယ်တော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေ5ရာခိုင်နှုန်းကိုထက်ပိုမိုပေးဆောင်မည်ဟု - သူတို့ကပိုမိုမြင့်မားအိမ်မှာအခွန်ကောက်ကိုယ်တော်တိုင်မှဟုတ်ကဲ့၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွဲများအနိုင်ရပြီလို့။
ဒီအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်, ဒါပေမယ့်အချို့အဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့ဖြစ်ပါတယ်ကြောင်း, ထိုအစိမ်းရောင် Giegold ကပြောပါတယ်။ "မော်လ်တာမသက်ဆိုင်ကဒုတိယအခွန်ကောက်ခံမှုမှကြွလာရှိမရှိ၎င်း၏အခွန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသနား။ က" ကျွန်းပေါ်မှာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၏အလွန်မြင့်မားတဲ့အရေအတွက်ကိုအနည်းဆုံးဖတ်ရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှု။
သို့သော် "LIMIT" ဟုအဆိုပါကြီးမားတဲ့ဂျာမန်ကော်ပိုရေးရှင်းပိတ်ဖို့ရန် - Scicluna ပြောမလိုပါဖြစ်ခဲ့သည်။ "ဒါဟာအားလုံးဿုံဥပဒေရေးရာ။ ဖြစ်ပါတယ်" ခဝါချမှုအားလုံးပြည်နယ်များအတွက်ရှေ့တော်သို့ဝင်။ "ဒါပေမယ့်အကြီးအသောသူတို့ကိုအပြစ်တင်ဒါသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာများကိုဖုံးကွယ်ဖို့သူငယ်များပေးပါ။ " မော်လ်တာရဲ့ဥပဒေများတိုင်းပြည်မှန်မှန်ငွေကြေးခဝါချမှုလစ်ကွက်ဟာကွက်များအတွက် check လုပ်ထားမယ်လို့ကြိုတင်အီးယူဝင်ရောက်ဖို့စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သညျ။ ဒါဟာဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်နှင့်အတူကွယ်ပျောက်ခဲ့ငွေကြေးခဝါချမှု ATAD အပေါ်အီးယူညွှန်ကြားချက်မွေးစား Scicluna ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကလည်းပွင့်လင်းပြည်ပမှာအနေဖြင့်တောင်းဆိုချက်အပေါ်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုထားပါ။ "
ပရီးမီးယားလိဂ် Galizias မပ်စ်ကတ်ဒသေသောနောက်နဝမနေ့၌ "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသား" နှီးနှောဖလှယ်ပွဲအပေါ်ဒူဘိုင်းကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ aligned က Henley & Partners ၏ဖြစ်ပါသည် - € 900.000 န်းကျင်၏စျေးနှုန်းမှာမော်လ်တာပတ်စ်ပို့ကိုရောင်းသောအေဂျင်စီ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသားပရိုဂရမ်ကိုဆိုလိုသည်။ မပ်စ်ကတ်က "အထက်တန်းလွှာ" အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများ "နေအိမ်သို့နှင့်နိုင်ငံသားများ၏အခြားရွေးချယ်စရာသောအရပ်တို့ကိုမ" ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အနက်ရောင်ငွေ verscherbeln passes
"ရုရှားနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှအမှောင်ကိန်းဂဏန်းများ" Galizia စာဖြင့်ရေးသားခဲ့ဖို့ "အတု Maltesen" လုပ်ရတော့မှာပါ။ ထိုသူတို့အဘို့, ထိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနက်ရောင်ပိုက်ဆံများအတွက်အခြား entry ကိုအမှတ်ထက် ပို. ဘာမျှဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Scicluna ကြောင်းကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်။ သန်းနိုင်ငံခြားသားတွေနှစ်တိုင်းအီးယူဗီဇာရလိမ့်မယ်။ "မော်လ်တာကိုရောင်းခဲ့တရာအဆိုပါအနည်းငယ်ပင်စာရင်းဇယားထဲမှာပေါ်လာမဟုတ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ တစ်ဦးမောလ်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုဝယ်သူကို "လောကနိုင်ငံသားများဖြစ်လိုသူများသောအားဖြင့်အနုပညာရှင်များသို့မဟုတ်အားကစားသမား" ရှိခဲ့သည်။
နည်းနည်းလေးသံသယမှာတောငျးဆိုခကျြမြား၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ဇာစ်မြစ်အဖြစ်ကကိစ္စတွင်သည်စတုတ္ထ application ကိုကြီးပယ်ချမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Scicluna ပြောပါတယ်, ဥရောပကော်မရှင်ပရိုဂရမ်ကိုလေ့လာနှင့်မျှမကန့်ကွက်ထမြောက်တော်မူခဲ့ပေ။ "တခြားနိုင်ငံတွေအီးယူတံဆိပ်ခတ်ခြင်းမရှိဘဲလုပ်ပေမယ့်ငါတို့အဘို့အကလက်ညှိုးကိုထောက်ပြသည်။ " တကယ်တော့မသာ bartered သြစတြီးယားတူညီသောပုံစံဖြတ်သန်းနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ တောင်မှဂျာမဏီအနည်းဆုံးယူရိုသန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, Self-အလုပ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနိုင်ပါတယ်။
ဘလော့ဂါအသေခံပြီးနောက်ဒသမညတွင်အမျိုးသမီးများသည်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်မပ်စ်ကတ်၏လှလှပပတောက်ပအရာရှိတဦးကနေအိမ်သို့များ၏ရှေ့မှောက်၌စုသိမ်းမည်။ သေးငယ်တဲ့စပီကာကနေ Beatles rattle ။ ဤနေရာတွင်အများစုက PN ၌ရှိကြ၏သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ထဲကလာပေမယ့်ဘယ်သူမျှမနားထောငျခငျြတယျ။ သင့်ရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုသင်တန်း၏, "ဘက်မလိုက်" ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအတူတကွဖျာနှင့်ဖမ်းထမ်းဘိုးကိုထုတ်လှိမ့်။ Long ကသူတို့စတုရန်းသိမ်းပိုက်ချင်တယ်။ အားလုံးအတူတူပင်အဖြူရောင်တီရှပ်ဝတ်ဆင်။ သငျသညျယခုကြည့်ရှုရှိရာ "ဘာပဲ: နေရာတိုင်းမှာလူလိမ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာ "သူတို့ဒေါသထွက်သည်။
ဂျာနယ်လစ်ကာကွယ်ပါ။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုမြားအတှကျ ဇန်နဝါရီလ 26th, 2019အိုလီဗာ Bienkowski
Tagged: ဖက်ဒရယ် Chancellery, ဒယ်ဖနီ Caruana Galizia, စာနယ်ဇင်းသမားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်
Android App ဘာရိန်း 13 ဖက်ဒရယ် Chancellery တရုတ်နိုင်ငံ လူအစုအဝေးရန်ပုံငွေ ဒယ်ဖနီ Caruana Galizia ညှဉ်းပမ်း freeRaif လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် ဂရိနိုင်ငံ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေး စာနယ်ဇင်းသမားများကာကွယ်စောင့်ရှောက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး Catalonia ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အဘယ်သူမျှမနယ်နိမိတ်သိတယ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း တိုက်ရိုက်စီး Stream swarm အကူအညီအသက်ရှင်နေထိုင် မော်ရိုကို da အိမ်တော်၌ NSA က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ Orlando တွင်အဘို့အသက်တံ့ သံချပ် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ swarm အကူအညီ စပိန်နွေဦး ပီရူလိုင်းနား ဝီဂါ ဥဂါးရ လွတ်လပ်ရေး အမေရိက၏ယူနိုက်တက်ရှတာဇီ လက်နက်ကုန်သွယ်မှု ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ scan! စောင့်ကြည့်မှု